Idei mmiri ga-etinye nde mmadụ n'ihe egwu n'ime afọ 25 | Netwọk Mgbasa Ozi
Idei mmiri bu ihe gbasara ihu igwe nke anyi gha eji mara. Dị ka otu nnyocha e bipụtara na akwụkwọ akụkọ Science Advance si dị, nwere ike ibibi n'ime afọ 25 sochirinụ dị ka ihe si na okpomoku zuru ụwa ọnụ.
Ka okpomọkụ na-arị elu, belụsọ na obere Ice Ice Age ga-eme n'ezie, a ga-enwe mgbanwe n'usoro ọdịda mmiri n'ụwa niile.
A na-anabatakarị mmiri ozuzo ahụ, mana mgbe ọ dara n'ụzọ dị egwu ha nwere ike ibute ọtụtụ nsogbu, ọ bụghị naanị site na osisi na-ada ada na mbuze, mana ha nwekwara ike igbu ọtụtụ mmadụ. N'ihi ya, ọ dị mkpa ịmata nke bụ ndị kasị ngwangwa mpaghara, nke ahụ bụ, ndị ọ ga-adị mkpa iji gboo ihe nchebe. Iji chọpụta ha, ndị na-eme nchọpụta gbanwere mgbanwe nke ụdị ihu igwe na nke mmiri na ọkwa ụwa metụtara mmụba nke okpomọkụ, na-echebara nkesa nke ndị mmadụ ugbu a.
N'ihi ya, ha nwere ike ịmata nke ahụ ọtụtụ n'ime United States, Central Europe, North na West Africa, yana India na Indonesia ga-esokwa na mpaghara kachasị emetụta site na idei mmiri n'ime afọ 25 sochirinụ.
Ọ bụrụ na emeghị ihe ndị dị mkpa, ndụ ọtụtụ nde mmadụ ga-anọ n'ihe egwu dị egwu. Na China naanị, ihe dị ka nde mmadụ iri ise na ise ga-ahụ ihe omume ndị a na-emebi ihe; na North America ha ga-aga site na 100.000 ugbu a gaa otu nde. O bu ihe nwute, ma dika odi otutu mgbe n’udi ndia, obodo ndi n’etolite etolite, tinyere obodo ndi ahu nwere oke onu ogugu mmadu, gabu ndi ga enwe nsogbu kariri ichebe onu ogugu ha.
A ga-agbakwunye na nke a, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume belata ikuku carbon dioxide, nke bụ otu n'ime ndị na-ahụ maka okpomoku ụwa, ọ nweghị ihe ọ bụla a ga-eme iji gbochie nke a ime.
Maka ozi ndị ọzọ, ị nwere ike ime pịa ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Idei mmiri » Idei mmiri ga-etinye nde mmadụ n'ihe ize ndụ n'ime afọ 25
Mgbanwe ihu igwe na-emehie ihe